Occlusion Mesial (prognathism mandibular)
Kuvele bite orthodontic - a bite kwamazinyo lokuvala ephelele noma ubuhlobo dentition yasenhla nemithombo yasenzansi ngesikhathi contact esiphezulu. Kunezinhlobo ezahlukene Ukulunywa - njalo futhi engaphumi njalo, lesikhashana unomphela, bokuphila, kanye okungafanele sokugembula. Imbangela angahlangani kungaba ukulimala noma kungenzeka ngofuzo, lapho embula ngeziphambeko kungenzeka kuphela wamazinyo onekhono noma udokotela wamazinyo. bite Lungile kubaluleke kakhulu, inquma nempilo yabantu, kokubili emzimbeni nasengqondweni.
Phakathi zonke izinhlobo malocclusion angawodwa bite mesial (kangaka okuthiwa "ngokumamatheka bulldog"). prognathism Mandibular (siyinzalo) libhekene indawo engalungile ephansi kanye engenhla emihlathini, okungukuthi umhlathi ongezansi is kwaphoqa phambili, ngenkathi amazinyo ephansi ahlelwe phambi amazinyo engenhla. Kuleli fomu amazinyo womuntu iphrofayela anomaly libhekene ezinzima, isihambile phambili kwesilevu ukuhlafuna nzima futhi kumzwise ngisho nobuhlungu.
is the mesial luma kanjani?
Ezimweni eziningi, lokhu zokugula kuyinto zofuzo noma lezinceku (awathengiwe), ngenxa ukuthuthukiswa engafanele emhlathini yasenhla nemithombo yasenzansi. Ngaphezu kwalokho, nenzalo mandibular kungenzeka imiswe phakathi ontogenesis ebuntwaneni. Izizathu kumiswa ongakhonza ezahlukahlukene:
• yamathambo kanye ukukhula okungavamile amathambo;
• Ushintsho kwanoma namazinyo lezihlahla noma kamuva ukushintsha impande;
• frenulum selithi ulimi;
• imikhuba emibi wengane (njalo futhi isikhathi eside isithupha oncelayo, izingono, pacifiers nezinye izinto).
bite Mesial: ukwelashwa
Ukwelashwa lokhu anomaly - inkiyankiya yenkinga futhi isikhathi eside. Impumelelo ukuphathwa kuxhomeke kakhulu ezingeni obulukhuni zokugula nesikhathi sokwelashwa kudokotela. Ukuze silungise bite, thatha iminyaka engaba ngu-3-4. I ngaphambili inqubo yokwelapha, ngcono, ngoba imiphumela kuyoba esincane, kanye nokwelashwa yi zizosebenza ngaphezulu. Odokotela bamazinyo batusa ukuba aphathe kuze kube iminyaka engu-16, okungukuthi ezinganeni ngesikhathi dentition okuxubile, lapho kungenzeka ukuthonya ekukhuleni amathambo emhlathini. ongakhetha Ukwelashwa zincike engu-isiguli, kusukela izici zakhe.
• Ukuhlinzwa - wokwehla mandible (aphansi ubuso plastic) nge ukuhlinzwa maxillofacial. Ezimweni eziningi, ikhiphe ne ukusebenza futhi ulisebenzise uma okunzima kakhulu.
• Special zikagesi orthodontic ezifana besokunxele, imilenze.
• Uma kwabanye Izimo ukuhlinzwa akunakwenzeka, wenze ukususwa ezinye namazinyo umhlathi ongezansi ukuze sinciphise ubukhulu bayo.
Malocclusion, uma kungekhona ukulungiswa ngesikhathi, kungaholela emiphumeleni eziningi eziyingozi, futhi ngaphezu kwakho konke, kuthinta impilo. Omunye nezinkinga ezivamile kakhulu ezinzima iyona nemihuzuko lomugqa engenhla amazinyo, njengoba sonke ukuhlafuna wabe ukulayisha kubo ngesikhathi ukuhlafuna lilimele kakhulu izinyo koqweqwe lwawo, ngaleyo ndlela kwande luvelo isiguli ukuzwisa ubuhlungu. Eminye imiphumela bite mesial yilezi: yezifo ngokuhlanganyela temporomandibular, isifo periodontal, okuyinto ke kuholela ukwephula pheshana emathunjini. Ngaphezu kwalokho, lapho olunywe mesial eyenza umnikazi yayo eziningi mayelana nokubukeka, ngokuvamile abantu nale anomaly bacindezeleke ezingokwengqondo, imizwa zokuziphatha, nezinye izifo ukuthi liphazamisane ngokuphila ukuphila okuvamile futhi egcwele.
Kunoma yikuphi ukwelashwa kudlala indima zokuvimbela ezinkulu, ngoba lesi sifo kulula ukuze kuvinjelwe kuka ukuze ikhambi. Abazali kudingeka ukuqapha impilo yengane yakho futhi isimo amazinyo akhe, ukuze wean kusukela silungise imikhuba emibi futhi ukuzama ukufundisa ingane yakhe eya efanele yokunakekela amazinyo abo. Usuqhubekile eqakathekileko yokuthuthukisa - It is ukuthi embryogenesis ezaziwayo. Ngalesi sikhathi ingane namanje esibelethweni, kukhona kuthebhu izitho ezibalulekile, ukwakheka amathambo emhlathini, amazinyo ithebhu, ngakho omama abakhulelwe kufanele uqaphele impilo yabo ngesikhathi sokukhulelwa ukuze izingane zabo esikhathini esizayo kwakungekho izinkinga zezempilo.
Ingozi wamazinyo - nhlonhlo emise namazinyo ukukhubazeka
Nomtholampilo wamazinyo "Intan": Izibuyekezo
Catarrhal glossitis: indlela yokuphatha stomatitis ezinganeni
Metal lwezimpawu: ukuphila, izinzuzo nezingozi, ukubuyekezwa
Imiqhele phezu amazinyo
Medicine "Sulfadimetoksin": izinkomba ukusetshenziswa
Indlela yokukhetha ibhethri: ukulinganisa okungcono kakhulu. Imikhiqizo yebhethri
Ryse iNdodana aseRoma: Izidingo uhlelo ku-PC
Warts zangasese kubantu besilisa nakubantu besifazane - lena zokugula yingozi. ukwelashwa
Indodakazi Masha Rasputina: Iqiniso noma emnyama PR?
Homocysteine. Norma izinto ezisegazini
Indlela esiphatha ngayo eczema ezandleni kuyini lokho?
Pie ne Pollock: zokupheka best
DSU: okulotshiweyo. DSU isikimu. Ukufaka DSU